Gxila kwiNqaku ngeFotohop yokukhupha into kwiFoto | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Un Gxila kugxilwe kwi-Photoshop ukwenza into ibonakale kwifoto sisixhobo esisetyenziswa ngokubanzi ngu abafoti kunye nabayilis xa befuna ukuqaqambisa icandelo elinye lomfanekiso kunye nokususa ukuqaqamba kwenye indawo engabalulekanga kangako. Ngamaxesha amaninzi siya kufumana iifoto ezintle kodwa ukusilela ubunzulu okanye izinto ezibalulekileyo zalahleka ekubunjweni xa ifoto yathathwa.
Fiphaza imvelaphi ukuqaqambisa elona candelo likhulu lomfanekiso, yenza ubumdaka obunobuqili ukunciphisa ukubaluleka kokubonakalayo kwiinkcukacha ezithile okanye ngokulula ukufumana ukufota ngokudlala ngokubonakalayo. Yindlela eneziphumo ezihle kakhulu kwaye ayifuni lwazi lukhulu ngayo Photoshop.
Into yokuqala ekufuneka siyenzile ukwenza ifayile ye- Isiphumo sokugxilaNdiza kuba nefoto apho isiphumo sinokusetyenziswa khona, nje ukuba sibe nefoto siza kuyivula Photoshop kwaye siza kuqala ukusebenza.
Siphinda kabini umaleko iphambili kabini de ube uneelayi ezintathu zizonke.
Sikhetha umaleko embindini, kukolu luhlu apho siza kufaka khona ukufiphala. Kuyacetyiswa Chaza amagama Ukusebenza ngendlela enocwangco, kule meko sinokuthiya indawo embindini njenge "ngaphandle kokujolisa" kunye nomaleko ophezulu "kugqalisiwe" Ukusebenza ngale ndlela kubaluleke kakhulu ukuze singalahleki xa ukusebenza ngeendlela ezininzi.
Sakha i ukufiphala kweGaussia kumaleko asembindini, isixa sokufiphala yinto eyahlukileyo ngokuxhomekeka kwiimfuno zomntu ngamnye. Ukuba sifuna umahluko oqinileyo phakathi kwento enye nenye, njengokufiphaza imvelaphi, sisebenzisa ukungcola okukhulu.
Emva kokwenza ukufiphala into elandelayo ekufuneka siyenzile yenza imaski maleko kumaleko aphezulu (ngaphezulu komaleko ongagunyaziswanga) into eyenziwa yile maski kukuvumela ukuba umaleko ophezulu ube ngaphaya Ngokugqithisa ibrashi phezu kwayo. Yi ubuchule obusetyenziswa ngokubanzi kwimisebenzi emininzi nge Photoshop.
Ngoncedo lwebrashi siyahamba ukukhetha ezo ndawo sifuna ukuzifiphaza, sidlala iiparameter zebrashi: ubunzima, ukukhanya, ukuhamba. Esi siphumo sifezekisiwe kuba xa ukupeyinta kwindawo enebrashi sixelela inkqubo ukuba sifuna loo ndawo ibonakale, sishiya umaleko osezantsi ubonakala, sinokuyixabisa isiphumo sokufiphaza.
Sinokufaka isicelo uhlengahlengiso kumanqanaba ngenjongo gqamisa indawo enokukhanya. Iliso lomntu lihlala litsala kwiindawo ezinokukhanya okukhulu, ngenxa yeso sizathu ukwenza ezo ndawo zingabalulekanga kunokusinceda ukuba senze ukufundwa okungcono kwemifanekiso.
Ngoncedo lwe Photoshop sifunde ukwenza ifayile ye- Isiphumo esisetyenziswa ngokubanzi ekufotweni kunye nokusetyenziswa okungenamda kuzo zonke iintlobo ze iiprojekthi zemizobo. Ukusebenza ngeemaski zomaleko kunye nolungelelwaniso lolungelelwaniso lusisiseko, luyimfuneko kunye neziphumo zobungcali eziluncedo kubo bonke amagcisa emizobo. Phucula iifoto zakho kwaye ulawule ngaphezulu Photoshop enkosi ngoncedo lwale khokelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Tutorials » Ukugxila kumabala kunye neFotohop ukwenza into ibonakale kwifoto
Umsebenzi omninzi, akunjalo?
Kwimenyu yokuhluza unegalari yeziphumo zokufiphaza okunika ukugqitywa okuhle ngothotho lohlengahlengiso olupheleleyo.
UPablo Gondar sitsho
Le ndlela isetyenziselwa ukuchukumisa ngokuthe ngqo ngendlela ethe ngqo ngakumbi kule misebenzi ifuna iinkcukacha ezithe kratya. Kufana naxa ukulungiswa kombala kusebenza ngendlela eqhelekileyo okanye kwenziwa ngokulungiswa ngokuchanekileyo kusetyenziswa ukulungiswa okukhethiweyo. Kuya kufuneka uyazi into esiyifunayo kwiprojekthi nganye.
Phendula Pablo Gondar
I-Patreon-crowdfunding, indlela yokufumana imali